वालुवाटारमा बादलको अडान : नजित्ने चुनाव नलड्ने ! - Kohalpur Trends
वालुवाटारमा बादलको अडान : नजित्ने चुनाव नलड्ने !
२३ वैशाख, काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश अन्य समूहतर्फ रिक्त भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार (वैशाख २४ गते) उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ । तर, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले आफ्नो उम्मेदवार बिहीबार साँझसम्म टुङ्ग्याएको छैन ।
तर, माधव नेपाल पक्षका केही मतदाता विपक्षी गठबन्धनमा जान्छन् भनेर चुनावबाट डराउन नहुने बताउँछन् एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्याकुरेल । ‘माधव नेपाल पक्षका केही उता गए, उताको पनि यता आउन सक्छन्, ल्याउन सकिन्छ । चुनावबाट डराउने भन्ने कुरा त हुँदैन नि’ प्याकुरेलले अनलाइनखबरसंग भने ।
Previous Previous post: पत्रकार महासंघले बनायो १० बेडको आइसोलेसन
Next Next post: वीरगञ्जमा थप एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु